Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka OYSU/Perth oo shir ku gaadhay go’aano muhiim u ah ururka iyo halganka
Maamulka OYSU/Perth oo shir ku gaadhay go’aano muhiim u ah ururka iyo halganka
Maalinamadii Sabtida ee ay taariikhdu ku beegnayd 26/4/2014 ayaa waxa shir muhiim ah isugu yimid Ururka Midawga Dhaliyarda Iyo Ardayda Ogadenia (OYSU) Perth. Shirkaas oy kaga arinsanayeen howlaha shaqo ee horyaala hawlwadeenada ururka dhalinyarada iyo sidii loo fulin lahaa.
Ugu horeyn waxaa shirka furay Gudoomiyaha OYSU Perth, Ahib isaga oo u mahad celiyay dhamaan xubnaha kasoo qaybgalay shirka. Soo dhaweyntaa kadib wuxuu gudoomiyuhu ka hadlay wax qabadkii ururka dhaliyarada iyo hawlaha la doonayo inuu ururku fuliyo. Sidoo kale wuxuu gudoomiyuhu ka dhawaajiyay in la sii xoojiyo la dagaalanka waxkasta oo halganka shacabka S.Ogadenya ay ku doonayaan xoriyadooda wax u dhimikara iyo inay sii laba jibaaraan hawlaha ay halganka u hayaan. Intaa ka dib, waxaa laga dooday ajendihii shirka iyadoo si fiican loo falanqeeyay dhamaan qodobadii muhiimka ahaa, iyadoo go’aanadii ku haboonaa laga gaadhay.
Ugu danbayntii waxay dhamaan xubnuhii shirkan ka soo qaybgalay isku afgarteen hoostana ka xariiqeen in ay dar dar galiyaan hawlaha halganka ee shacabka dulman ee Ogadenia lagaga xoroynayo guumaysiga gabalkiisii dhacay ee Ethiopia.